Corona Forex Muujiyeyaasha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Corona Forex Muujiyeyaasha
Corona Forex Muujiyeyaasha
Corona Forex Muujiyeyaasha waxaa sidoo kale loo yaqaan gooldhalinta Corona. Waxay waxaa loogu talagalay in la siiyo ganacsade view dhamaystiran oo hawlaha suuqa. Waxa intaa dheer in la siinayo muujinaya qiimaha suuqa, Tilmaamayaasha sidoo kale muujinaysaa ganacsade marka ay (tilmaamayaasha) waa toddobaadkii ama xoog. Tani waa wax gaar ah ka mid ah tilmaamayaasha, kuwaas oo tan iyo ma tilmaame kale waxan sameeya. Tilmaamayaasha ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsade ah ay ku dooranayaan habka ugu haboon ee ganacsi adigoo ganacsade ah in suuqa la Daalacanayo ama baaskiil.
Jaantusyada Corona afar qaybaha ugu muhiimsan ee. Kuwani waa: Spectrum ka wareegga xukuma waxaa bixiyay, Cycle Signal si Saamiga Buuq, Sida Wacan ee Swing iyo luminayey Taxana ah. Waa in aanu si loo eego shaqada ee mid kasta oo tilmaamayaasha si ganacsade ku ogaan karaan waxa in la raadinaya in kasta oo ka mid ah tilmaanta.
Spectrum The Waxaa cabiraya waxqabad kasta oo xilliile ah suuqa dhacda gudahood lix ilaa soddon baararka ama laambadood oo isticmaalaya taxane ah filtarrada digital. Ilodanimada inayan ee wax soo saarka ee filter kasta waxaa la barbar dhigo signal ugu adkeysi iyo natiijada waxaa loo soo bandhigay in ka badan kala duwan oo Ilodanimada 20 desibelo qaab map kulaylka a. Dhab ahaantii, midabada for signal ugu adag waa huruud. Markaas sida amplitudes hoos, bandhigay "qaboobeyso off" ilaa madow. The line wareegga horeyn waxaa laga soo ka mid ah calaamadaha ugu adag in qaybaha kala ah.
Cycle Signal in Saamiga Buuq. Waxaa la soo bandhigay shaxda iyo waa synchronous markii la shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Waxay leedahay miisaan toosan ee 1 dunuunaca in 11 dunuunaca. Tusaale ahaan haddii Signal si Saamiga Buuq bilaabmaa si ay u sameeyaan a "Corona" hoos 4 dB, waxaa aad u digaa in ratio waxay noqon karaan kuwo aad u hooseeyo si ammaan ah si ay u isu bedbeddelaan ganacsiga ku salaysan wareeg oo keliya.
lagugu tuday sawirka.1. Jaantusyada Corona on shaxda ah.
Tilmaamayaasha Corona shan tirada. Tilmaamayaasha Kuwanu waa _v2.1 CoronaCyclePeriod, CoronaDashBoard _v1, CoronaSNR _v2.1, CoronaSwingPosition _v2.1 iyo _v2.1 CoronaTrendVigor.
CoronaCyclePeriods_2.1 wuxuu muujinayaa hawlaha xilliile muddada cayiman ayaa loo isticmaalaa gudahood. Midabada spectrum ee sida kor ku xusan ka wada hadleen la raacay. _v2.1 The CoronaSwingPosition dhinaca kale muujinaysaa bed qiimaha suuqa. Waxa ay muujinaysaa in qiimaha suuqa waxaa kor ama hoos u dhaqaaqin. CoronaTrendVigor _v2.1 muujinaysaa dhaqankan cusub ee qiimaha suuqa. _v1 CoronaDashBoard wuxuu ku siinayaa warbixin kooban oo dhan tilmaamayaasha kale. Waxa ay muujinaysaa xoogga calaamadaha ay bixinayso.
Sida loo isticmaalo Muujiyeyaasha Corona in ay ku ganacsan
Tilmaame ugu weyn ee ay eegaan waayo sheegaysa in ganacsiga ama ma aha _v1 CoronaDashBoard ah.
Fig.2. sawir A of CoronaDashBoardv1.0 ah.
Laga soo bilaabo si dhekhso kor ku xusan waxaad ka arki kartaa in _v1 CoronaDashBoard ah. Muuji xoogga kasta oo tilmaamayaasha. Sidaas darteed haddii xoogga tilmaamayaasha oo dhan waa mid xoog badan, ganacsade ah waa in ay si raaxo leh in ay meel ganacsi.
Sidaa darteed markii dadka ganacsade meel waa in si iibiyay a?
ganacsade waa meel si iibiyay markii _v2.1 CoronaSNR ah, CoronaSwingPosition _v2.1 iyo _v2.1 CoronaTrendVigor ayaa soo bandhigeysa codsi uu hoos u qiimaha suuqa. Haddii ay arintu sidan tahay, hubi in ay arkaan in CoronaDashBoard ka muuqdaan ifafaalo xoog.
Maxaa ku saabsan gadashada?
ganacsade waa meel si iibsan marka _v2.1 CoronaSNR ah, CoronaSwingPosition _v2.1 iyo _v2.1 CoronaTrendVigor ayaa soo bandhigeysa mooshin ah intii ka sii weynayd ee qiimaha suuqa. Haddii ay arintu sidan tahay, hubi in ay arkaan in CoronaDashBoard ka muuqdaan ifafaalo xoog.
Fig.3. Saarid si iibsan isticmaalaya Muujiyeyaasha Corona ah.
Fig.4. Xaaladahan oo kale ganacsade ah waa inay iska ilaaliyaan ganacsiga.
Corona Forex Tilmaamayaashu waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Corona Forex Muujiyeyaasha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Corona Forex Indicators.mq4?
Nuqul ka Corona Forex Indicators.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha Corona Forex Indicators.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Corona Forex Indicators.mq4 4 Chart?
article PreviousMTN Forex Tusiyaha
Next articleAuto Taxana Forecaster Forex Tusiyaha